HomeAqoonta SariirtaCoronavirus & Kulanka Sariirta: Miyaa Caabuqa Coronavirus Lagu Kala Qaadi Karaa Kulanka Sariirta?
Iyada oo uu jiro Faafista Xanuunka Coronavirus waliba Fara Ba’an ku hayo adduunka oo dhan waxa jirta su’aal ay lamaanaha is qaba is waydiinayaan taas oo ah Xanuunka Coronavirus maku Gudbaa Kulanka Sariirta?
Kulanka Sariirta & Coronavirus?
Sida aan ognahay xanuunka Coronavirus ayaa ah mid ku gudba Neefsiga waana mid laga qaado dhanka Afka iyo sanka waliba Si dhib yar u gudbaya marka laga hadlayo dhanka Neefsiga Afka iyo Sanka.
Laakiin arimuhu way ka duwantahay marka laga hadlayo kulanka sariirta inkasta keenaysa in ay labada qof ee is qaba kala qaadi karaan xanuunka hadii uu midkood qabo.
Si kasta ha ahaatee kuma kala qaadi karaan dhanka Hubnaha taranka laakiin labada qof ee samaynaya kulanka sariirta ayaa isku Neefsanaya inta uu socdo kulanka sariirta taas oo keenaysa in ay kala qaadi karaan xanuunka Coronavirus.
Hadii uu mid ka mid ah lamaanaha is qaba qabo xanuunka Coronavirus waxa fiican in aanay labada qof samayn kulanka sariirta maadama ayna suurtagal tahay in ay labada qof kala qaadi karaan laakiin waxa ay kaliya ku kala qaadi karaan Neefta laakiin kuma kala qaadi karaan kulanka sariirta.